कसरी सोडियम नाइट्रेट क्रिस्टल विकास गर्ने
सोडियम नाइट्रेट एक सामान्य रासायनिक हो जुन भोजन, उर्वरक, गिलास तामचीनी र पाइयोटेक्निक्समा पाइन्छ। सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, बिरुवा रहित हेक्सागोनल क्रिस्टल। यद्यपि यी क्रिस्टलहरू प्रारम्भिक क्रिस्टल भन्दा बढ्दो चुनौतीपूर्ण हो, रोचक क्रिस्टल संरचनाले उनीहरूको प्रयासको लायक बनाउँछ। क्रिस्टल केहि कैल्साइट जस्तै छ, केहि गुणहरु को प्रदर्शन। सोडियम नाइट्रेट क्रिस्टलहरू डबल अप्ठ्यारो, भित्ता र चमकको जाँच गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सोडियम नाइट्रेट क्रिस्टल बढ्दो समाधान
पहिलो सर्वोच्च समाधानको तयारी गर्नुहोस्।
110 ग्राम सोडियम नाइट्रेट प्रति 100 मिलीलीटर गरम पानी भत्काउनुहोस्। यो एक supersaturated समाधान हुनेछ। बढ्दो क्रिस्टलको एक तरिका यो समाधान एक पूर्वनिर्मित स्थानमा शांत गर्न अनुमति दिन्छ र यसलाई तरल वाष्पीकरणको रूपमा क्रिस्टल उत्पादन गर्न अनुमति दिन्छ।
यो क्रिस्टलको विकास गर्ने अर्को तरिका एक एकल क्रिस्टल बढ्न हो जसले ठूलो मात्रामा समाधानबाट निस्किएको छ। यदि तपाईं यो विधि पछ्याउने छनौट गर्नुहुन्छ भने, अव्यवस्थित समाधान तयार पार्नुहोस्, यो समाधानलाई ठुलो पार्ने अनुमति दिनुहोस्, त्यसपछि सोडियम नाइट्रेटको एक किने अन्न जोड्नुहोस् र कन्टेनर मुहर गर्नुहोस्। थप सोडियम नाइट्रेटले अन्नमा जम्मा गर्नेछ, एक संतृप्त सोडियम नाइट्रेट समाधान सिर्जना गर्दछ। यो दिन हुनको लागि केहि दिन अनुमति दिनुहोस्।
संतृप्त समाधान टाँस्नुहोस्। यस समाधानको सानो मात्रामा एक उचाइ डिशमा राख्नुहोस्। सानो बीउ क्रिस्टल उत्पादन गर्न तरल, तरललाई अनुमति दिनुहोस्। थप वृद्धिको लागि क्रिस्टल वा दुई चयन गर्नुहोस्।
Supersaturated बढ्दो समाधान तयार गर्न, तपाईंको अवस्थित समाधानमा मूल समाधानमा पानीको प्रति 100 मिलीलीटर सोडियम नाइट्रेटको3ग्राम थप गर्नुहोस्। त्यसकारण, यदि तपाईं 300 मिलीलीटर समाधान तयार गर्नुभयो भने, तपाईंले सोडियम नाइट्रेटको अतिरिक्त9ग्राम थप गर्नुहुनेछ।
ध्यानपूर्वक यो तरल आफ्नो बीउ क्रिस्टल जोड्नुहोस्। तपाईं एक नायलॉन monofilament देखि क्रिस्टल निलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ। एक नायलॉन मोनोफिलाम वा तार प्रयोग गरिएको छ किनकि यसले समाधानलाई पनीरहेको छैन, वाष्पीकरणको कारण बन्यो।
जार मुहर र क्रिस्टलहरूलाई निरन्तर तापमानमा बढाउन अनुमति दिनुहोस्, कहिलेकाहीँ तिनीहरू विचलित हुनेछैनन्। सोडियम नाइट्रेट तापमान परिवर्तनको धेरै संवेदनशील छ, त्यसैले निरन्तर तापमान कोयम राख्न महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईसँग तापमान बनाए राख्नु भएकोमा कठिनाई छ भने, तपाईं पानी नुहाउन भित्र मुहर जार राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंले केही दिन पछि क्रिस्टल विकास देख्नुहुन्न भने, तापमानलाई थोडा कम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
बीज क्रिस्टल कसरी विकास गर्ने?
एक ग्लास घनत्व प्रदर्शनमा इंद्रधनुष कसरी बनाउने
नकली फिशिंग पकाउनुहोस्
इंद्रधनुषको रंगीन आगो कसरी बनाउने?
कसरी मिल्ने रकेट बनाउनुहोस्
क्रिस्टल फोटो गैलरी
रोटिङ बाट जैक-ओ-लालटेन कसरी राख्नुहोस्
नृत्य रस्सी विज्ञान प्रयोग
स्केटबोर्डिङको लागि टेप टेप गर्ने मार्गदर्शक
डेनियल हैरोल्ड रोलिंग, गाइनसेविल खरानी
एम्मा वाटसन र बेल हुक्स फाइनान्सिज्म चर्चा गर्नुहोस्
टोयोटा टन्ड्रा डीजल डिलिवरी प्रोजेक्ट ट्रक
Origami Yoda को अजीब मामला
तपाइँको कक्षाको साथ डाक्टर सेसको जन्मदिन मनाउनुहोस्
कतिपय टैरो पढ्नको लागी खर्च गर्नु पर्छ?
समीक्षा: बैटमैन / सुपरमैन # 30 (2016)
Eckerd कलेज प्रवेश
सिफारिसको पत्र कसरी लेख्नुहुन्छ
D-Day को बारेमा उद्धरण
सेनेका फल्स रिजोल्युशन: महिला अधिकारहरू 1848 मा माग गर्दछ
दोस्रो सेमिनोले युद्ध: 1835-1842
जब मानिसहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई मार्छन्: भ्रूण हत्यारेको कानुन कानुन बुझ्ने
Venustiano Carranza को जीवनी
अमेरिकन सिभिल युद्ध: मेजर जनरल डराएर एन। सोफे
प्रायः बनाइएको मजेदार कुखुरा क्रिसमस स्वेटरको 20
"आउनुहोस् एक सौदा बनाउनुहोस्" टिकटहरू
वाटरपाउ के हो?
ठीक कला प्रिंटम्याकिंग को एक परिचय
कुन देशहरु सबैभन्दा अधिक र कम पड़ोसीहरू छन्?